Warbixintii hore ee Iskuulka Burdhuubo – EASTAD.ORG
Warbixin ku saabsan Iskuulka Burdhubo Primary School oo ku yaala magaalada Buurdhuubo ee Gobolka Gedo
Inta aanan soo bandhigin war bixin faah-faahsan oo qoraal ah iyo mid cod ah oo ku saabsan Iskuul Buurdhuubo ku yaala oo magaciisa la yiraahdo BURDHUBO PRIMARY SCHOOL, waxaan halkan idinkugu soo gudbineynaa muuqaalka Iskuulkaas dhinacyada: Dhismaha, qolalka wax barashada, albaabka hore ee Iskuulka, muuqaalka Ardayda oo gabdho iyo wiilal isugu jira, tirada guud ee ardayda, tirada wiilasha, tan gabdhaha, tirada macalimiinta, maamulaha iyo gudoomiyaha iyo sidoo kale muuqaalka iyo magacyada macalimiinta, maamulaha iyo Gudoomiyaha Iskuulkaas.
Ugu horeyntii, xaalada waxbarasho ee Buurdhuubo meel xun ayey mareysaa oo ardeyda iyo waalidiintooda niyad waa u hayaan waxbarashada, balse gacantooda ayaa maran. Haddii aan la helin kaalmo deg-deg ah oo Iskuulkaas loo fidiyana, waxaa xaqiiqo ah in ardayda faraha badan ee Iskuulkaas dhigata in aanay marnaba gaari doonin hadafkooda wax barasho ee ay hadda sida weyn diyaarka ugu yihiin in lagu garab qabto.
Waxa hadda ugu dara ardaydaas waxaa ka mid ah qolalka wax lagu baro oo ah dersooyin oo xilliga roobku uu da’ayo ardeyda waa la kala diraa. Sidoo kale, kuraas iyo miisas la’aan ayaa jirta sida aad sawirada ku arki doontaan.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Iskuulka Burdhubo Primary School waa sidan:-
1- Dhismaha Iskuulka waa dersooyin aana wax roob ah celinaynin, oo aan u ekayn goob wax lagu baran karo.
2- Kurasta iyo miisaska lagu fadhiisto waa ilaa 15 xabo oo aan u habeysneyn kuwa waxbarashada. Ardeyda waxay kuraas ahaan ugu fadhiistaan dhagxaan, Biibab iyo dhulka.
3- Maamulaha Iskuulka oo la yiraahdo Cabdi xaaji iyo macalimiinta sawiradooda hoos baad ku arki kartaan.
4- Tirada maamulaha iyo macalimiinta waa 7 waxayna kala yihiin: Cabdi xaaji Maxamed-(Maamule), C/laahi Aden (macalin), Odowaa C/laahi haaruun (macalin), Aden ukure C/laahi (macalin), Sh.C/qaadir Maxamed Muuse (macalin), Maxamed Aden Maxmed (macalin), iyo Ibraahin Sh. Cabdi Bashiir (macalin).
5. Tan wiilasha Iskuulka dhigata waa 140, tan gabdhaha waa 144, isu geynta guud ee tirada ardeyda Burdhubo Primary School waa 288 Arday.
6. Manhajka waxbarashada Iskuulka waa midka Gobolka laga istcmaalo oo ay dejiyeen Hay’adaha UNICEF iyo UNESCO.
7- Iskuulka waxaa la aas’aasey 1993-diii, ardeyduna waxay ku kala jiraan fasalada 1-aad ilaa 8-aad ee Dugsiga hoose ilaa Dhexe.
8- Todobada macalin – kiiba waxuu qaataa bishii lacag dhan $60 oo ay bixiso Hay’adda NCA oo ay ugu talagashay in la siiyo macalamiinta wax ka dhigta dugsiyada 1-aad ilaa 4-aad oo ma ogola NCA in ardeydu ay gaaran ilaa fasalka 8-aad.
Hay’adda NCA wax shaqo ah kuma lahan dhismaha dugsiga iyo qalabka waxbarashada oo waxay ku kooban tahay oo keliya mushaarka 7-da macalin, waxayna waalidiinta Buurdhuubo u sheegeen in ay bixiyaan wax qabadka Iskulka boqolkiiba konton (50%) taasi oo waalidiinta aardeyduna ayan awoodin.
Xasuusin: Warbixin dheeri ah oo intaan ka faah-faahsan iyo wareysiyo maqal ah oo lala soo yeeshay maamulaha, Gudoomiyaha, macalimiinta iyo qaar ka mid ah Ardayda Iskuulka Burdhubo Primary School dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa haddii uu rabi idmo.
Website kiihore eeg halkan archive
← Muuqaalka ardayda Iskuulka Luuq
El-Adde/ceelcade school in 2012 Reported by Adan karash →